Shiseido Zen - siliphunga ngoba amadoda nginenhliziyo kunquma
Yinkimbinkimbi, ubunjalo nobuhle kwabesifazane kanye ngangokunokwenzeka uzokwazi ukugcizelela lamagcobo. Amanye amantombazane efana ukukhanya entwasahlobo flavour, kuyilapho abanye - ayegcwele kanye Daisy chain. Khetha makha evumelana nawe, ngezinye izikhathi kuvela izabelo eziyinselele. Uma namanje emi embundwini ukukhetha, ukubheka ukunambitheka Shiseido Zen.
Shiseido Zen wadalwa komthaki abanamakhono abavela Japan - Michel Almairac, ngo-2000, isimo izimfundiso Buddhist. Lokhu Iphunga kukuvumela ngempela ngehlise umoya. Eau de toilette Shiseido Zen hhayi kuphela baveza owesifazane engcono, kodwa futhi kukusiza ukuba sivumelanise umbono ezingokomzimba nezingokomzwelo nezwe elingaphandle. Kule minyaka engu-eyishumi, amakha Shiseido Zen akaphelelwa yayo ukwanda phakathi abathandi we-must, ukhuni nokukhanya ezimibalabala izingoma.
Ladies abakhetha amanzi yangasese SHISEIDO Zen babe kalula ngesisa elimangalisayo futhi umuzwa isitayela. Shiseido ukunambitheka ethandwa, akungabazeki, efana intombazanyana nge yomhlaba ocebile kwangaphakathi, nemvelo lokusungula, okungenza ufuna ukwenza umhlaba ube licace, sihle futhi evulekile for impumelelo ezintsha.
Njengoba for version madoda, amakha ukukhanya Shiseido Zen Abantu unezinkolelo wonke umkhathi ajabule of Japan, ezweni ilanga, lapho Yenziwa. Kuyokusiza ekuvuleni nasekwandiseni bazizwa inhliziyo yenu nomphefumulo wenu, ukuze bazethembe futhi ukholo ngokwakho.
Shiseido Zen Iphunga okusikhumbuza inganekwane. Phakathi womshini yayo indima enkulu udlalwa ngu kukhethwa izingxenye eliphezulu ukwakha isixha olukhethekile amaphunga, futhi ukugujwa isilinganiso sazo kula manzi. Kuyimfanelo kanye izandla onekhono wenkosi bamakha ziye zasiza ukudala le Iphunga edume.
Shiseido - kuyinto ukunambitheka elula kodwa ohlakaniphile. Ukhumbuza Hoku Japanese. Upper amakha amanothi inhlanganisela kwehlobo Ukuthoma ka bergamot, amasimu aluhlaza futhi amnandi valerian grechavki, okuyinto ama-molecule ezishintshiwe ngokukhethekile. Inhliziyo amakha kuthatha nokuvumelana imibala ngephunga rose, oki moss, elikhanyayo entwasahlobo violets ne-tart, ukukhanya, iphunga ecashile iris. Ngaphezu kwalokho, kukhona izinkuni Iphunga ukulele ipheya esihlahleni, must ezihloniphekayo, fleur patchouli, okuyinto kunomphumela toning nobhontshisi ezikhangayo, okuyizinto okuxubile amber viscous. Gcwalisa isikhala izingxenye idatha kahle ukubopha okunoshukela, kodwa ngesikhathi esifanayo, freshness mnene bamboo oluhlaza.
Ukuphelela futhi banganhlanhlatsi ka perfume toilette, kokubili besifazane kanye namadoda, ngaphansi logo Shiseido Zen Abantu kugcizelela ibhodlela amakha - nguye ngesimo cube eyenziwe ekhanyayo.
Izicukuthwane, Ukwanelisa inkanuko, ukuvumelana - zonke lezi zimfanelo skilfully zimunye ukunambitheka Shiseido. Zizwe azithande ngezinga nezwe ngaphandle, sibonga ukunambitheka Japanese Shiseido Zen.
Izibuyekezo nakoMoya abalandeli ukuthi lokhu iphunga eliphefumulelwe ngeke ahlale ngaphandle ukunakwa imvelo izinkanuko, abalungele ushaye futhi senze umhlaba ube ngcono futhi licace.
Ngakho, Shiseido Zen - ukukhethwa i lady nenhle, ozethembayo abanamakhono futhi zokudala okwaziyo nenhloko nxazonke, ngokungagcini nje ngokubashumayeza, amehlo akho engqondo, kodwa futhi igagasi Iphunga emangalisayo, wadala e-Japan. Ngakho-ke, uma sikhona isizathu emthumeni, akukho ezifanele aminingi ukudlula Shiseido Iphunga.
Dye ngoba amashiya "Estelle" - ukuphakama ekupheleleni
Oriflame inkampani e-Ukraine. indaba
Amakha amahle kubantu besifazane: ukulinganisa, isithombe
Ingane engavamile kakhulu emhlabeni, umbono weningi
Isimo sezindlela incike kokuhambisana asphalt izindlu ubuchwepheshe
Ivan-itiye: okuhle nokubi. Indlela yokuphuza kahle i-willow-tea
Umsuka isiRashiya futhi oyiyo lucebe